Pinegrow: A Pụrụ Iche na Desktọpụ Editor na WordPress ike | Martech Zone
Ekwenyesighi m ike na ahụrụ m onye nchịkọta akụkọ mara mma karịa na ahịa karịa Pinegrow. Onye nchịkọta akụkọ na-enye dezie-na-ebe arụ ọrụ yana nyocha oge na-anabata ya. Nke kachasị mma, Pinegrow anaghị agbakwunye usoro, usoro ma ọ bụ ụdị ọ bụla na koodu gị.
Keyfọdụ igodo atụmatụ Pinegrow:
edezi - Tinye, dezie, nkwaghari, mmepụta oyiri ma ọ bụ hichapụ HTML ọcha.
Framework - Nkwado maka Bootstrap, Ntọala, AngularJS, 960 Grid ma ọ bụ HTML.
Ntinye ederede ọtụtụ peeji - Dezie otutu peeji n’otu oge. Oyiri na enyo peeji nke - ọbụlagodi ọkwa dị iche iche na nha ngwaọrụ.
Editọ CSS - Dezie CSS iwu anya ma ọ bụ site na koodu. Jiri Stylesheet manager na mmepụta oyiri, itinye ma wepu stylesheets.
Na-edezi Weebụ - Tinye URL ma dezie ibe dịpụrụ adịpụ: gbanwee nhazi, dezie ederede na ihe oyiyi, gbanwee iwu CSS.
Nhazi Nzube - Mepụta usoro nzaghachi site na iji ihe enyemaka ihe enyemaka Media. Tinye nkwekorita omenala ma ọ bụ ka Pinegrow chọpụta ha site na nyochaa ụdị mpempe akwụkwọ.
Ọbụna ihe dị ịtụnanya, Pinegrow nwere WordPress mgbakwunye na-enye gị ohere itinye WordPress ihe ma gosipụta ọdịnaya dị adị. Nke a bụ ezigbo mma maka ndị gị na-emepe ma ọ bụ na-edezi isiokwu WordPress.
Tags: nchịkọta akụkọdezie-na-ebeeditọ phppinegrowwordpress isiokwu nchịkọta akụkọnwysiwyg
Ọkt 29, 2015 na 10:09 AM
M na-eji Pinegrow arụ ọrụ m ma ugbu a, ana m arụ ọrụ 2x ọsọ ọsọ. Ma ọ bụ ọbụna karịa.
Ọ bụ nnukwu ngwaọrụ!
Mee 28, 2017 na 4: 48 PM
Phụnanya Pinegrow. Achọpụtakwara m ụfọdụ plugins na-akwụghị ụgwọ maka ya ị nwere ike ibudata ebe a https://pluginsforpinegrow.com